Bromance ဇာတ်လမ်းသစ်မှာ ကမ်းလှမ်းခံထားရတဲ့ Lin Yi နဲ့ Zhao Yingbo | News Bar Myanmar
Bromance ဇာတ်လမ်းသစ်မှာ ကမ်းလှမ်းခံထားရတဲ့ Lin Yi နဲ့ Zhao Yingbo
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Bromance ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးမှုတွေကတော့ အရင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့အပြင် လတ်တလောထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “Word of Honor” ဇာတ်လမ်းမှာလည်း Bromance ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်လာတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးတွေပါဝင်နေတာကြောင့် ကြည့်ရှုသူတွေအံ့သြခဲ့ကြသလို အားပေးကြည့်ရှုမှုတွေကလည်း စံချိန်တင်ပါပဲ။
ထွက်လာဖို့ကျန်ရှိနေတဲ့ Bromance ကားတွေအပြင် လက်ရှိမှာလည်း နောက်ထပ် Bromance ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် Lin Yi နဲ့ Zhao Yingbo တို့ကို ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “A Certain Someone” ဆိုတဲ့ Bromance ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ လူကြိုက်များတဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Zhao Yingနဲ့အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ဖို့ Lin Yi ကိုပါ ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ မူရင်းဝတ္ထုကတော့ လူကြိုက်များလှပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့… Sheng Wang တစ်ယောက် ကျောင်းပြောင်းလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲ Jiang Tian နဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရာက သိကျွမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုနေ့ ညပိုင်းမှာပဲ Sheng Wang တစ်ယောက် Jiang Tian ဟာ သူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့် အံ့သြစရာနေ့ရက်တွေစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
မတည့်အတူနေနှစ်ယောက်သား မာနတွေ မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်​ယောက် ရန်လိုနေကြတာကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းက အဆင်ပြေတဲ့နေ့ဆိုတာ မရှိလောက်အောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘဲ မတွေ့မိအောင်ဖြတ်သန်းကြရင်းက နောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အားပေးနှစ်သိမ့်ရမဲ့အခြေအနေဟာ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်း Sheng Wang နဲ့ Jiang Tian ဟာ တစ်ယောက်အတွက်တစ်ယောက် မရှိမဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်မှန်းသိလာခဲ့တဲ့အခါ.. ရှေ့ဆက်ပြီးနေ့ရက်တွေကိုဘယ်လိုဖေးမဖြတ်သန်းသွားမလဲ? သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် အတူရှိတဲ့အချိန်တွေဟာ လုံလောက်ပါ့မလား? နောက်ထပ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရော ရှိလာဦးမလား? ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။
သာမာန်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပဲရိုက်ကူးလေ့ရှိတဲ့ Lin Yi နဲ့ Zhao Yingbo တို့အတွက်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စိန်ခေါ်မှုများမဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့် ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံမလား?ငြင်းဆန်မလားဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်သိရမှာပါ။ မေလမှာ စတင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်တဲ့ ဒီ Bromance ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် မင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တို့ကော ဘယ်လိုမျိုးထင်ပါသလဲ?
Next TWICE’s Sana အတွက် Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာခြင်းဟာ သူမကို ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သလဲ »
Previous « “Word of Honor” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ တဟုန်ထိုးနာမည်ကြီးလာခဲ့သူ Gong Jun ရဲ့ ဇာတ်ကောင်အပေါ်အတွေးအမြင်